Ko Rohingya | This WordPress.com site is the bee's knees
27-03-2013 ရက်နေ့က ဗမာပြည်က ကမ္ဘာကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ သီတဂူဘုန်းကြီးက မုသားဝါဒကံကို ချိုးဖောက်ပြီး သမိုင်းရဲ့ အရှိတရား၊ အမှန်တရားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး သမိုင်းဖျောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက “ခရစ်ယာန်တွေ၊ အစ္စလာမ်တွေ ရောက်လာတာက အင်္ဂလိပ်ဝင်မှ ရောက်လာတာ။ အဲဒီနောက်မှ ရောက်လာတာ ဆိုတော့ နှစ်တစ်ထောင်မပြောနဲ့ တစ်ရာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက အိမ်ရှင်နိုင်ငံပါ။ အဲဒီလို Invade လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ Migrate လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက် လာကြတဲ့ လူတွေက ဧည့်သည်တွေ။”ဆိုပြီး The Voice Weekly ဂျာနယ်နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောကြားခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့တင် ရပ်မသွားပဲ 02-04-2013 ရက်နေ့မှ ထပ်ပြီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်း သာသနာရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးအောင်ကြည်က ““ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ တရားဝင်ဗလီဆိုပြီး ဆောက်ခွင့်ပေးတာ မရှိပါဘူး။ အစဉ်အလာအရ တည်ဆောက်ပြီး ၀တ်ပြုတယ်။ သူတို့တွေ အစဉ်အလာအရ ဗလီတည်ဆောက်တာ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မကန့်ကွက်တာပါ။ ဗလီတွေကို သူတို့ဘာသူတို့ ဆောက်တယ်။ အဲဒီဗလီမှာ သူတို့ဘာသူတို့ စာသင်ကြတာပါ။ တရားဝင်ဗလီဆိုပြီး မရှိပါဘူး”ဆိုပြီး သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီးပြီး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုစီမံကိန်းကြီးမှာ မီဒီယာတာဝန်ခံဌာနကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ Eleven Media Group က 03-04-2013 နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ တရားဝင် ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ တင်ခဲ့တယ်။
သီတဂူဘုန်းကြီးရဲ့ အိမ်ရှင်နဲ့ ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ စကားဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေသလို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအ၀င် အခြားတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ ဒါထက် ဆိုးတာက သမိုင်းမှန်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုကြီးရဲ့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လက္ခဏာတွေထဲက ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဗမာပြည်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာရောက်ရှိခဲ့တာ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ဆိုတာကို ငြင်းမရနိုင်တဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားတွေ ရှိနေပါတယ်။ အကယ်၍ သီတဂူဘုန်းကြီးအနေနဲ့ ဒီအချက်ကို လက်မခံဘူးဆိုရင် သမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲကျင်းပပြီး ဆွေးနွေးဖို့ စီစဉ်သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သီတဂူဘုန်းကြီးအနေနဲ့ မိမိမှာ သမိုင်းဆိုင်ရာ ပညာမဲ့ခြင်းကြောင့် မေ့မှား၍ ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ဗမာပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးက တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားတွေကို ဧည့်သည်ဆိုပြီး ကျူးကျော်စော်ကားခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်လည် တရားဝင် တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။
ဦးအောင်ကြည်ဆိုတာကတော့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက စစ်အစိုးရဟောင်းတွေရဲ့ လက်ပါးစေတစ်ဦးပါပဲ။ သူပြောတဲ့အချက်ဟာ အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် ဒီအချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီး တိုင်းသိပြည်သိ ကမ္ဘာသိကြေညာသင့်ပါတယ်။ ဦးအောင်ကြည်ရဲ့ စကားဟာ ဗမာပြည်တစ်ဝှမ်းမှာ မွတ်စလင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံးက အထွဋ်အမြတ်အထားတဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွေကို မီးရှို့၊ ဖျက်စီးနေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ပိုပြီး သောင်းကျန်းဖျက်စီး မီးရှို့နိုင်အောင် မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် စစ်အာဏာရှင်တွေက မတရား သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာတောင် ပါဝင်နေတဲ့ ကမာန်လူမျိုးစုဆိုတာ မွတ်စလင်မ်တွေ ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ အခြား တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ မွတ်စလင်မ် လူမျိုးစုတွေ ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ကတော့ ပသီ (ခေါ်) ဗမာမွတ်စလင်မ်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ပန်းသေးနဲ့ ပသျှူးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သီတဂူဘုန်းကြီးနဲ့ ဦးအောင်ကြည်တို့နှစ်ဦးရဲ့ စကားတွေဟာ အခြားအချိန်၊ အခြားကာလမှာ ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိစ္စမရှိသော်လည်း ယခုလို အလွန် အထိအခိုက်လွယ်တဲ့ ကာလမှာ ပြောခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့မှာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိကို ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဗမာပြည်တစ်ဝှမ်းက မွတ်စလင်မ်တွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ပစ်ဖို့ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းကြီးကို အထောက်အပံ့ ပြုဖို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သီတဂူဘုန်းကြီးနဲ့ ဦးအောင်ကြည်တို့ဟာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီး၍ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးကို နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားစေရန် တရားဝင် လှုံ့ဆော်သူနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သူတို့နှစ်ဦးအနေနဲ့ မေ့မှား၍ ပြောခဲ့မိတယ်ဆိုရင် ဗမာပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးက မွတ်စလင်မ်လူထုကို အမြန်ဆုံး တရားဝင် ပြန်တောင်းပန်သင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
This entry was posted on April 5, 2013, in စိန်ခေါ်မှုများ, ချေမှုန်းခြင်း, ဆောင်းပါး and tagged ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ဘုန်းကြီး, မုသားဝါဒီ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သမိုင်းလိမ်, သီတဂူ, ဦးအောင်ကြည်, မြန်မာ, မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ.	Leaveacomment
မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ပေးရန် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ စာပို့ရန်
Email ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်တွင် လူကြီးမင်းရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပါ။
Subject နေရာတွင် အောက်ပါစာကို ကူးထည့်ပါ။
We urgently need the protection of United Nation
Message ဆိုသော နေရာတွင် အောက်ပါစာကို ကော်ပီကူးပြီး ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် Send ဆိုတဲ့ Button လေးပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ။
We have no words to express our feelings. We, Burma’s Muslim urgently need the protection of United Nation. Please send UN peacekeeping forces to protect us from any kind of violence that happening in Burma.
The government of Burma failed and ignores intentionally to protect our life, human dignity, wealth, etc. More than 10 million Burma’s Muslims are in danger. The Hidden Genocide are continuing in Burma. In conclusion, we would like to request you that please send urgently peacekeeping forces to protect us.
ဒီနေရာမှာ လူကြီးမင်းရဲ့ နာမည်ကို အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်းပြီး ထည့်ပါ။ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါက ပိုပြီး စာကို လေးနက်စေပါတယ်။ လုံခြုံမှုအတွက် စိတ်ချလို့ရပါတယ်။
This entry was posted on March 24, 2013, in ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့.	Leaveacomment
တစ်ချို့က မွတ်စလင်မ်လူထုကြီး လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှာကို ၉၆၉ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဆင်ထားတဲ့ဂွင်ထဲဝင်သွားမှာ စိုးရိမ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်အနေနဲ့ မွတ်စလင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံး အချိန်မှီဆင်ခြင်နိုင်ဖို့၊ စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အချက်အချို့ကို လေးစားစွာနဲ့ ထောက်ပြပါရစေ။
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတုန်းက စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေ၊ ကိုယ့်အိမ်တံခါးကို ကိုယ်ပိတ်ပြီး အေးချမ်းစွာ ထိုင်နေခဲ့ကြတဲ့ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်၊ နှိပ်စက်၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်ခြင်း ခံခဲ့ကြရတာ အဲဒီ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေက လမ်းမပေါ်မှာ ထွက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီး အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ အစွန်းရောက်တွေ ဆင်ထားတဲ့ ဂွင်ထဲကို ၀င်ခဲ့ကြလို့လား။
၂။ လမ်းမပေါ်မှာ ထွက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင် ရရှိမဲ့ အကျိုးအမြတ်က အိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေပြီး ဆုံးရှုံးရမဲ့ အရှုံးထက် အများကြီးပိုပြီးသာပါတယ်။
၃။ အဲဒီလို လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့လို့ အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေက တိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်တွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ် လုံခြုံမှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို ထင်ထင်ရှားရှား ကမ္ဘာသိ ဖော်ထုတ်ပြလိုက်ရာ မရောက်ဘူးလား။
၄။ အကယ်၍ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေက မတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် မွတ်စလင်မ်လူထုကြီးအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒကို ကမ္ဘာသိဖော်ထုတ်ပြသလိုက်ရာ မရောက်ဘူးလား။
၅။ အဲဒီလို မွတ်စလင်မ်လူထုကြီးအနေနဲ့ ကမ္ဘာသိ ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံတကာက ဒီကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်လာမယ်။ မွတ်စလင်မ်ကမ္ဘာကလည်း ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပြီး မွတ်စလင်မ်လူထုရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တောင်းဆိုပေးနိုင်မယ်။ အကယ်၍ United Nations ကနေပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ မစေလွှတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့နိုင်ငံတွေက ကိုယ်ပိုင် ငြိမ်းချမ်းတပ်တွေကို စေလွှတ်ပေးလာနိုင်တယ်။
၆။ အခုအခြေအနေက မွတ်စလင်မ်လူထုကြီးက ဘယ်လောက်ရှောင်ရှောင် မရတော့ဘူး။ အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက်တွေက ဓာတုသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သောင်းကျန်းနေတာဖြစ်တယ်။
၇။ အဲဒီအတွက် ၀ီရသူလို ၉၆၉ အစွန်းရောက်တွေ၊ အကြမ်းဖက်တွေကို မဖမ်းမဆီးဘဲ လွှတ်ပေးထားတယ်။ ရဲတွေ အရှေ့မှာတင် ဓားနဲ့ ခုတ်နေတယ်။
၈။ ဟိုနေ့က မွတ်စလင်မ်တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မယ်ဆိုတာ သတင်းလွှင့်လိုက်တာနဲ့ ရဲကားတွေ တန်းဆီပြီး ချန်ထရီယံဟော်တယ်အရှေ့မှာ စောင့်နေတယ်လို့ သိရတယ်။
၉။ ဓာတုသိန်းစိန် အစိုးရက ဘာကြောင့် မွတ်စလင်မ်လူထုကြီးက ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှာကို ဒီလောက် တုန်လှုပ်နေရတာလဲ။ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ ဆန္ဒပြပြီ ဆိုတာနဲ့ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေမှာ ပါလာမယ်။ နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေက ဒီကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်ပြီး ဖိအားပေးလာမယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် သူတို့ရဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် ထပ်ပြီးတော့ သတ်ဖြတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
၁၀။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးက ဘယ်လို ရှောင်ရှောင် မလွတ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ကို အနှေးနဲ့ အမြန် ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာကို စာရှုသူကိုယ်တိုင် သိနေပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၁၁။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရဲ့ အခြေခံမူဝါဒတစ်ရပ်ပါ။ ဘယ်အစိုးရကမှ ငြင်းပယ်လို့ မရပါဘူး။
အချုပ်ကတော့ဗျာ- ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြဖို့ အခုအချိန်မှာ အရမ်းကို အရေးကြီးနေပါပြီ။ ဒီလို လုပ်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာမို့လိုပါပဲ။ အခု မိတ္ထီလာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် (၀ါ) သမ္မတကမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်တာ မကြားရသေးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေ ထွက်မလာသေးလို့ပါပဲ။ အသံထုတ်ပြီး အသက်ကို ကယ်ပါ။ အိမ်မှာထိုင်နေပြီး အသတ်ခံမဲ့အစား လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်စေချင်ပါတယ်။
ဒါက ကျနော့ရဲ့ ရိုးသားစွာနဲ့ တင်ပြတဲ့ အမြင်ပါဘဲ။ ကျနော် သိမြင်သမျှကို ပြောပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိတာမို့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၊ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းမှ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ အာမီးန်။
This entry was posted on March 24, 2013, in ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, စိန်ခေါ်မှုများ, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, မြန်မာ.	Leaveacomment
ဒီလောက်ခံခဲ့ပြီးတာတောင် ရန်သူအစစ်ကို မမြင်နိုင်ကြသေးတာ အံ့သြမိပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက အခုအချိန်အထိ ကိုယ့်ရဲ့ ရန်သူအစစ်အမှန်ဟာ ဘယ်သူမှန်း မသိကြသေးဘူး။ လူသတ်အစိုးရ ဓာတုသိန်းစိန်ဆီကနေပြီး အကာအကွယ်ရဖို့ မျှော်လင့်နေကြတယ်။ မြန်မာပြည်က အပြည်မဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို စနစ်တကျ စီမံကိန်းချပြီး သတ်နေတဲ့ ဓာတုသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှာကို မျှော်လင့်နေကြတယ်။ သူက လူကြီးမင်းတို့ကို စောင့်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အိမ်တွေ မီးလောင်ပြာကျသွားပြီး၊ လင်ကွဲ၊ မယားကွဲ၊ သားကွဲ၊ အမေကွဲ၊ အဖေကွဲ ဘ၀တွေကို ရောက်ပြီးမှပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မိတ္ထီလာက အပြစ်မဲ့ ပသီတိုင်းရင်းသားတွေလို နာဇီငရဲစခန်းတွေထဲကို သွင်းပြီးတော့မှပါ။ အဲဒီကျရင်လည်း အလှူရှင်တွေကို ဆန္ဒပြပြီး၊ လူကြီးမင်းတို့ကို ဆေးဝါးပြတ်လပ်ပြီး သေကြေအောင်လို့၊ ရိက္ခာပြတ်လပ်ပြီးသေကြေအောင်လို့ ၉၆၉ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး သတ်ပုံမမှန်တဲ့ ပိုစတာတွေကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြခိုင်းပါအုံးမယ်။ အိမ်တွေ ပြန်ဆောက်ပေးမယ့် သူတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင်တောင် ၉၆၉ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေကို အသုံးချပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ခွင့်ပြကာ လှလှပပ ပညာတွေ ထပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်ကို သိနားလည်ချင်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အဖြစ်သနစ်တွေကို သေသေချာချာ ပြန်လေ့လာပါ။
ဓာတုသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရဆီကနေပြီး အကာအကွယ် ရရှိဖို့ မျှော်လင့်နေကြခြင်းကို ကျနော်ကတော့ ရူးသွပ်ခြင်းလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ မှားတယ်လို့ ထင်ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ မိတ္ထီလာဖြစ်စဉ်မှာ တစ်ချို့က ရဲတွေက မထိန်းသိမ်းတတ်တာတို့၊ အဓိကရုဏ်းမဖြိုခွင်းတတ်တာတို့ ပြောနေတယ်။ ကျနော် ရီချင်တယ်။ ရွှေဝါရောင်မှာ ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်း သံဃာတော်တွေကို ဘယ်လို ဖြိုခွင်းခဲ့သလဲ။ တလွဲတွေ ဆံပင် မကောင်းကြပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းက မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးက တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားမွတ်စလင်မ်တွေကို နာဇီငရဲစခန်းခေါ် ကန့်တွေထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ပါပဲ။
သူတို့ ရိုးသားခဲ့ရင် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာကတည်းက ပြတ်ပြတ်သားသား ဥပဒေအရ ဘာကြောင့် အရေးမယူခဲ့တာလဲ။ အစိုးရကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေလို့ဆိုတာကို ဘယ်သူ ငြင်းနိုင်မှာလဲ။ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းက မွတ်စလင်မ်တွေ အားလုံးကို လူမျိုးတုန်းအောင် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ဖို့ လုပ်နေတာပါပဲ။
မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းက မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့က ထိထိရောက်ရောက် တောင်းဆိုပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျနော်တို့က တောင်းဆိုလို့ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေကို UN က ချက်ချင်း မလွှတ်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ UN က ဘာမှ ပြောလို့မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီလို အဖြစ်မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ UN ကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေကို စေလွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ မိမိတို့နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးသမားတွေကို ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ လွှတ်ပေးပြီး လူနည်းစုတွေရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေကို စစ်အာဏာရှင် လူယုတ်မာတွေရဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခိုင်းပါ။ အနောက်တိုင်းရဲ့ ဓလေ့က ဆန္ဒပြပြီး လူထုက မတောင်းဆိုသမျှ သူတို့က အလေးအနက်ထားပြီးတော့ မစဉ်းစားပါဘူး။ မယုံရင် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး၊ ပညာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့ အနောက်တိုင်းမှာ အခြေချနေထိုင်နေကြတဲ့ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတဲ့သူတွေကို မေးမြန်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျနော် အရမ်းကို စိတ်တွေ ပူနေပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း စိတ်တွေ ပူနေကြမှာပါ။ အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၊ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းက မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ အာမီးန်။
This entry was posted on March 24, 2013, in ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သားသတ်သမား.	Leaveacomment
ပြေးလာတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ သံရုံးတွေ အားလုံးထဲကို ၀င်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ခိုင်းပါ။
သံရုံးတွေဆိုရာမှာ အနောက်တိုင်းသံရုံးတွေကို ပြောတာပါ။ ဥပမာ- အမေရိကန်၊ ဗြီတိသျှ၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်နဲ့ အခြား အနောက်နိုင်ငံက အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ သံရုံးထဲကို ၀င်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောာက်ခိုင်းစေချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ဥပေဒေအရ သံရုံးဆိုတာ သူနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရ လက်အောက်ခံမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့မိခင်နိုင်ငံရဲ့ လက်အောက်ခံပါ။ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား ဂျူလီယန်အက်ဆန့်ဂ်ျဆိုတဲ့ ၀ီကီလီက်ကို တည်ထောင်တဲ့သူဟာ လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ တောင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်ခုထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အားလုံး ကြားမိလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီသူကို တောင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်ခုက ခိုလှုံခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာာဥပဒေအရ တာဝန်ရှိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မိတ္ထီလာက လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုအတွင်းက လွတ်လာတဲ့ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေမှာ ၀င်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ခိုလှုံခွင့် အမြန်ဆုံး လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အပြင်မှာနေရင် သူတို့ရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေက လုံခြုံမှုလုံးဝ မရှိလို့ပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြောင်းသွားဖို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒီလို ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ သံရုံးတွေထဲကို ၀င်ရောက်ပြီးတောာ့ သူတို့ရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ ယှဉ်ပြီးတော့ ဒီကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်လာပြီး၊ မြန်မာအစိုးရကို ဖိအားတွေ ပေးလာပြီိဆိုရင် ယခုပေါ်ပေါက်နေတဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး ရပ်ဆိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
This entry was posted on March 24, 2013, in ဓါတ်ပုံ, မီဒီယာ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, ဓာတုသိန်းစိန်, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, အကြမ်းဖက်သမား, ဦးသိန်းစိန်, မြန်မာ.	Leaveacomment
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဗားမားထံကို စာရေးသားစေချင်ပါတယ်။ သူ့မှာ United Nation ကို ဖိအားနဲ့ ထောက်ခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ အလွန် အစွမ်းထက်တဲ့ အာဏာရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်များစေလွှတ်ပြီး၊ မြန်မာ့မွတ်စလင်မ်များရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် စာပို့ကြရအောင်။
စာပို့ရန် အောက်ပါလင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။
မဖြည့်မဖြစ် ဖြည့်စွက်ရမဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ရေးသားဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ကျန်တဲ့ ကွက်လပ်တွေကတော့ နားလည်တယ်ဆိုရင် ဖြည့်နိုင်ပြီး၊ နားမလည်တဲ့သူဆိုရင် မဖြည့်ရင်လည်း ဖြစ်တာမို့ ဖော်ပြမပေးတော့ပါ။
First Name နေရာတွင် လူကြီးမင်းရဲ့ ပထမနာမည်ကို ရေးထည့်ပါ။
Last Name နေရာတွင် လူကြီးမင်းရဲ့ နောက်ဆုံးနာမည်ကို ရေးထည့်ပါ။
(ဥပမာ- သိန်းစိန်ဆိုလျှင် သိန်းသည် First Name ဖြစ်ပြီး၊ စိန်သည် Last Name ဖြစ်ပါတယ်။)
Email နေရာတွင် လူကြီးမင်းရဲ့ အီးမေးလ်ကို ရိုက်ပါ။
Type နေရာမှာ ရှိတဲ့ ခလုပ်သုံးခုထဲမှ International ကို ရွေးချယ်ပါ။ (အကယ်၍ အမေရိကန်တွင် နေထိုင်သူ မဟုတ်ခဲ့ပါလျှင်)
Country နေရာတွင် လူကြီးမင်း လက်ရှိနေထိုင်နေသော တိုင်းပြည်ရဲ့ အမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ (ဥပမာ-Burma)
Subject နေရာတွင် State Department ကို ရွေးချယ်ပါ။
Message နေရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါစာသားကို ကူးယူ၍ ထည့်လိုက်ပါ။
We, one of the minority groups in Burma are seriously violated by Buddhist terrorists. A lot of our children, women and men have been killed by Buddhist Terrorists in the genocide of Burma. This genocide has been systematically planed and sponsored by pre-military junta, Thein Sein’s government. Since the government of Burma is the main sponsor of this genocide, how could we expect the protection of our lives from Burmese government? We have no hope for protection from our government. We have no life protection and more than 10 million lives of Burmese Muslims are in danger because of the serious crime of genocide.
We humbly and strongly request you to recommend for sending United Nation peacekeeping forces into Burma to protect our lives. Please urgently send UN Peacekeeping forces to protect innocence lives if you love peace and human rights sincerely.
ဤနေရာတွင် လူကြီးမင်းရဲ့ အမည်အပြည့်အစုံကို ရေးသားပါ။
Contact Meရဲ့ အရှေ့မှာ ရှိတဲ့ Button ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ပုံတွင် ဖော်ပြထားတဲ့ စာလုံးနှစ်လုံးကို တိတိကျကျ မှန်ကန်အောင် ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် Submit ဆိုတဲ့ Button အပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
This entry was posted on March 24, 2013, in ဓါတ်ပုံ, ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ, မီဒီယာ and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဗိုလ်နေ၀င်း, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သမ္မတ အိုဘားမား, ဦးသိန်းစိန်.	Leaveacomment
ကျနော်တို့ရဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသား အုပ်စုကြီး (၅) စုရှိတယ်။ အဲဒီ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်အုပ်စု (၅) စုကတော့ (၁) ပသီ၊ (၂) ရိုဟင်ဂျာ၊ (၃) ကမာန်၊ (၄) ပသျှူးနဲ့ (၅) ပန်းသေးတို့ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု (၅) စုထဲမှာ ဦးခင်ရီပါဝင်တဲ့ so-called ဒီမိုကရေစီအစိုးရက ကမာန်မျိုးနွယ်စုမှအပ ကျန်တဲ့ မျိုးနွယ်စု (၄) ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုပဲ ခါးခါးသီးသီး သူတို့တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ မဟုတ်လို့ ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ ငြင်းပယ်နေဆဲဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖို့ သူတို့ဟာ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေအရ ကိုက်ညီနေပါလျှက် ဘာကြောင့် တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုရတာလဲ။ သူတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးကို ဘာကြောင့် ငြင်းပယ်နေရတာလဲ။
ဦးခင်ရီရဲ့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖွင့်ဆိုချက်များအရ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးဟာ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာ ပါ ၀င်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကောင်းပြီ။ အဲဒီ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးမှာ ပသီ၊ ပန်းသေးနဲ့ ပသျှူးတို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ဦးခင်ရီတို့ရဲ့ so-called ဒီမိုကရေစီ အစိုးရက အသိအမှတ် မပြုရဲရတာလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း မန္တလေးမြို့က ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ဟာ ‘ပသီ’တိုင်းရင်းသားရဲ့အမည်ကို သုံးပြီး၊ နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် လျှောက်ထားတာကို ‘ပသီ’ ဆိုတာ စစ်အာဏာရှင် သားသတ်သမား တရုတ်ကပြား ဗိုလ်နေ၀င်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ (၁၃၅) မျိုးမှာ မပါလို့ဆိုပြီး ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးခင်ရီကတော့ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာမှာ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးဆိုပြီး ထပ်တလဲလဲ ကိုးကားပြီး၊ ဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ။ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးမှာ ‘ပသီ’၊ ‘ပန်းသေး’နဲ့ ‘ပသျှုးတို့’ပါဝင်နေတာကို ဦးခင်ရီ သိပါသလား။ ဦးခင်ရီရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်က အမှန်လား။ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိပဲ ဖွင့်ဆိုနေတာလား။
တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရန် သမိုင်းကြောင်းအရ၊ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ကိုက်ညီနေတဲ့ ကျုပ်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုကြီး (၅) စုကို ကျောသား၊ ရင်သား မခွဲခြားပဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ ကင်းရှင်းစွာနဲ့ တိုင်းရင်း သားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ရာမှာ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတိုင်းရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ပဲ ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ ဦးခင်ရီတို့ အစိုးရ ဟာ ဒီမိုကရေစီကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အစိုးရဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကမာန်လူမျိုးစု တစ်စုကို သာလျှင် ၎င်းတို့ရဲ့ လူဦးရေ နည်းပါးမှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ ကျန်တဲ့ အုပ်စုကြီး (၄) ကိုတော့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုသေးပါ။ ဒီလို အသိအမှတ် မပြုခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းစနစ်များနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာ ဦးခင်ရီတို့ အစိုးရအနေနဲ့ သိရှိပြီးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Discrimination လို့ခေါ်တဲ့ ခွဲခြားဖိနှိပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုကို ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ရဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု တစ်စု အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင် သားသတ်သမား၊ တရုတ်ကပြား ဗိုလ်နေ၀င်း ရဲ့လက်ထက်မှာ တိုင်းရင်းသားစာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများဟာ စစ်အာဏာရှင် လက်ထက် အဆက်ဆက် နှစ်ပေါင်း (၅၀) ခန့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ယခု ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများက တောင်းဆိုနေတာဟာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖို့ထက်၊ သူတို့ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး ကို ပြန်လည် ရရှိအောင် တောင်းဆိုနေခြင်း ဖြစ်တယ်။ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီး သား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို ဦးခင်ရီတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြန်လည် ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းနေကြခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးခင်ရီတို့ရဲ့ ယခု ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဆိုတာကလည်း စစ်အုပ်စုကနေ အရေခွံ့လဲထားတဲ့ သူတွေက အများစုဆိုတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ စရိုက်ဆိုးတွေကို မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးကြောင်း၊ သူတို့တွေရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေ၊ ပြောဆိုချက်တွေ၊ ရေးသားချက်တွေက သက်သေခံနေပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကလည်း အကယ်၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးကြောင့် ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်သုဉ်းခဲ့ရတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်းကို ပြန်လည် ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ရခိုင်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အပေါ်မှာ ဗိုလ်ကျစိုးမိုး၊ အနိုင်ကျင့်လို့ မရတော့မှာ၊ လူတွင်ကျယ်လုပ်ပြီး ကတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်လို့ မရတော့မှာ၊ ဖိနှိပ်ခွဲခြားလို့ မရတော့မှာကို အရမ်း စိုးရိမ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို စိုးရိမ်နေရင်လည်း ဘာကြောင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် ဆီကို ချီတက်နေရတာလဲ။ ပဒေသရာဇ် နိုင်ငံတော်ဆီကိုသာ ချီတက်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားအချို့က တိုင်းရင်းသားတိုင်းဟာ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိရမယ်။ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ရရှိရမယ်။ လူသားတိုင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိရမယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိရမယ်။ အမျိုးသားတိုင်းဟာ အမျိုးသား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိရမယ်။ ကလေးသူငယ်တိုင်းဟာ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ရရှိရမယ်။ မသန်စွမ်းတဲ့သူတွေဟာ မသန်စွမ်းတဲ့သူတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အပြည့်အ၀ ရရှိရမယ်။ ဒီလို အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိလာအောင် လူထုက တင်မြှောက်ထားတဲ့၊ လူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိုးရက တာဝန်ခံရမယ်။
အကယ်၍ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို နှောင့်ယှက်တဲ့သူ၊ ဖျက်စီးတဲ့သူဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရန်သူပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီရန် သူတွေကို လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရက နှိမ်နင်းရမယ်။ ချေမှုန်းရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကစပြီး ဖြစ်ပျက်နေခဲ့တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးမှာ ဦးခင်ရီတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရက အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်တဲ့ ရခိုင် အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့တောင် ပူးပေါင်းပြီး၊ ရာဇ၀တ်မှုအမျိုးမျိုးကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သက်သေ အထောက်အထားများအရ သိရှိနိုင်တယ်။ အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံ နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တယ်။ နှိပ်စက်တယ်။ အပြစ်မဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်။ ကလေး သူငယ် အများအပြားကို သတ်တယ်၊ ဖြတ်တယ်၊ မီးပုံထဲကို ပစ်ချခဲ့တယ်။ လူမဆန်တဲ့ ရာဇ၀တ် မှုပေါင်းများစွာကို ကျူးလွန်နေ ခဲ့တယ်။ ဒါတွေဟာ သမိုင်းတွေပါ။
ဒီလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မော်ကွန်းတင်ခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ခံရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှတ်တမ်းတွေမှာ ဦးခင်ရီရဲ့ နာမည်ဟာလည်း ပါလာမှာ မုချမလွဲပဲ။ အဲဒီတော့ ဦးခင်ရီ သေဆုံး သွားတယ်ဆိုရင်လည်း ဦးခင်ရီရဲ့ မျိုးဆက်တွေဟာ ဦးခင်ရီရဲ့ မကောင်းမှု အကုသိုလ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ မကောင်းကျိုး ကို လောကမှာတင် ပြန်ခံရမှာပါ။ ၀ဋ်ဆိုတာ ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။ မျက်မှောက်ဘ၀မှာတင် တူသောအကျိုးကို ပြန်လည် ခံစားကြမှာပါ။ အဖိနှိပ်ခံတွေရဲ့ မျက်ဝန်းတွေက ကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေရဲ့ စူးရှမှုများ၊ မီးပုံထဲပစ်ချခဲ့တဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ ငြီးတွားသံများ၊ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့ သွေးတွေက စကားပြောလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ဦးခင်ရီရေ၊ ခင်ဗျားတို့ so-called ဒီမိုကရေစီ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာ၊ ပသီ၊ ပသျှူးနဲ့ ပန်းသေးတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုခဲ့ရင်လည်း၊ ခင်ဗျားတို့ အသိအမှတ်မပြုလို့ လုံးဝ မရတဲ့ အခြေအနေကို မကြာခင်မှာ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေဟာ ကျူးကျော်သူတွေပါ၊ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသူတွေပါလို့ စွတ်စွဲပြီး၊ တတိယနိုင်ငံကို ပို့ဖို့ အရှက်သိက္ခာ မရှိ၊ လူသားချင်းစာနာစိတ် လုံးဝမရှိတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဓာတုဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် ဦးခင်ရီတို့ရဲ့ so-called ဒီမိုကရေစီ အစိုးရက စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားခဲ့တာတောင်၊ မအောင်မြင်ခဲ့ပဲ အခု နိုင်ငံသားကဒ်တွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ပေးနေရသလိုပဲ၊ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ ဦးခင်ရီတို့ရဲ့ so-called ဒီမိုကရေစီ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအပါအ၀င် ပသီလူမျိုးစု၊ ပသျှူးလူမျိုးစုနဲ့ ပန်းသေးလူမျိုးစုတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြု ကိုပြုရပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေ ပေးကို ပေးရပါလိမ့်မယ်။
ဦးခင်ရီတို့ အစိုးရအာဏာပိုင်များအနေနဲ့ ပသီ၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ပန်းသေး၊ ပသျှူးစတဲ့ လူမျိုးစု အသီးသီးကို ဘာကြောင့် တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုရပါသလဲ။ အကြောင်းပြချက်တွေကို တရားဝင် စာထုတ်ပြီး၊ တိုင်းသိပြည်သိ၊ ကမ္ဘာသိ ကြေညာသင့်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးကို ချပြသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဦးခင်ရီတို့က “ငါတို့ တိုင်ရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုချင်တဲ့သူကို ငါတို့ တိုင်းရင်းသား ပေးမယ်”လို့ ဆိုခဲ့ရင်လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား တစ်ကမ္ဘာလုံးရှေ့မှာ ကြေညာ သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ လူထုတစ်ရပ်လုံးအနေနဲ့ ဦးခင်ရီတို့ရဲ့ အကြောင်းပြချက်ဟာ ခိုင်လုံမှုရှိ၊ မရှိ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်မှု ရှိ၊ မရှိ၊ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ဝေဖန် သုံးသပ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ဦးခင်ရီအနေနဲ့ အမှန်တရားကို မုန်းတီးလို့ ချေမှုန်းပျက်သုဉ်းအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ အမှန်တရား ကတော့ ပျက်သုဉ်းမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် ဦးခင်ရီသာလျှင် အမှန်တရားရဲ့ ချေမှုန်းခြင်းကို ပြန်ခံရမှာပါ။ ဦးခင်ရီရဲ့ ပြုခဲ့သမျှကံ (အလုပ်)ရဲ့ အကျိုးဟာ ဦးခင်ရီထံကိုပဲ ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ အနှေးနဲ့ အမြန်ပေါ့ဗျာ။
မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများနှင့် ၎င်းတို့ရဲ့ အလိုတော်ရိ အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်း ဖက်ခြင်း အမျိုးမျိုးမှ ကင်းဝေး၍ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ် သုံးပါးစလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။ အာမီးန်။
This entry was posted on March 11, 2013, in ကမာန်, ပန်းသေး, ပသီ, ပသျှူး, ရိုဟင်ဂျာ, ဆောင်းပါး and tagged ကမာန်, ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, တိုင်းရင်းသား, ပန်းသေး, ပသီ, ပသျှူး, ရိုဟင်ဂျာ, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, မြန်မာ.	Leaveacomment